Nkebi nke 1: Mere eme iPhone rapaara na Apple logo ihuenyo
Part 2: Idozi Apple logo ihuenyo nke aka
Part 3: Idozi "iPhone Nọgidesiri on Apple logo" na-enweghị adịkwa Data
1. Mgbe upgrading ka iOS 9 na gị iPhone.
2. Mgbe jailbreaking gị iPhone.
3. Mgbe Iweghachi gị iPhone si iTunes ma ọ bụ iCloud.
4. Mgbe nwere otu ihe iseokwu mgbe wụnye ihe melite ma ọ bụ na-eme a mgbe weghachi.
Mgbe gị iPhone na-rapaara na Apple logo ihuenyo, ọ ga-ekwe ka ị na-aga ebe ọ bụla ma na-anọ na otu Apple logo ihuenyo oge niile. Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịnọgide na-eji gị iPhone, i kwesịrị chepụta ụzọ iji nweta ya mere. Ọzọ, ka ego niile kwere omume ụzọ ọnụ n'okpuru.
Nkebi nke 2: Idozi Apple logo ihuenyo nke aka
Ọtụtụ mgbe, i nwere ike idozi nke a nke aka site onwe gị, ma ọ bụrụ na e nweghị nsogbu ndị ọzọ na gị iPhone. Agbanyeghị, nke a agaghị eme ihe ọ bụla na-emerụ gị iPhone (iOS 9). Soro nzọụkwụ n'okpuru ma na-eme ya na gị na iPhone nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Press Ike button na Home button na gị iPhone n'otu oge. Nzọụkwụ 2. Mgbe ihuenyo aga nwa, hapụ ma buttons ozugbo. Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ ịbịachi Ike button, ruo mgbe Apple logo Pop elu, na ugbu a, ị nwere ike hapụ Ike bọtịnụ.
Mgbe a sekọnd ole na ole, gị iPhone ga-restarted. Ọ bụrụ na ọ na-akawanye azụ nkịtị mgbe ibidogharịa, na ị na ofu nke ugbu a. Ị nwekwara ike na-ekiri na-eso video nduzi n'okpuru, ọ bụrụ na-amasị gị.
Nkebi nke 3: Idozi "iPhone Nọgidesiri on Apple logo" na-enweghị adịkwa Data
Ka na-esi gị iPhone rapaara na Apple logo ihuenyo? Ị nwere ike ịgbanwee a ụzọ ugbu a. Gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iphone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery (Windows), nke nwekwara ike mee ka ihe iPhone si Apple logo ihuenyo azụ nkịtị. Ọ dịghị mgbe kwesịrị ị iweghachi gị iPhone na eme ka ọ bụla data ọnwụ nke. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ idozi "iPhone Nọgidesiri on Apple logo". Lelee ha.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS
Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Mgbe ahụ, malite ya ozugbo. Mgbe ahụ, jikọọ gị iPhone (iOS 9 akwado) na kọmputa na eriri USB.
Ke isi window nke Wondershare Dr.Fone maka iOS, pịa "Rụzie Sistem" taabụ na n'elu aka nri. Na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ ụfọdụ ndetu diaplayed ke window. Ọ bụrụ na ị na-enweghị nsogbu niile mgbanwe ọ ga-eweta, pịa "Ekem".
Mkpa: Biko mara na site gwara nke - iPhone araparawo Apple logo, na iOS sistemụ na gị iPhone ga-emelitere ka ọhụrụ version. Ma ọ bụrụ na ọ bụ nga-agbajikwa iPhone, mgbe ahụ, ọ ga-emelitere ọ bụla nga-agbaji.
Ọhụrụ window, ukara na femụwe download njikọ maka gị iPhone ga-nyere. Ị kwesịrị ị na ibudata femụwe. Ọ bụrụ na ị ebudatara ya n'ihu, mgbe ahụ, ebe a ị dị nnọọ mkpa họrọ "Ugbua ebudatara" na-agagharị na kọmputa gị aka ịchọta ya.
Nzọụkwụ 4. Idozi iPhone Nọgidesiri on Apple logo
Mgbe nbudata na-ahọpụta ndị ukara femụwe n'ihi na gị iPhone (iOS 9 akwado), ị kwesịrị ị pịa bọtịnụ "Malite Idozi" ka usoro ihe omume idozi ndiiche nke gị. Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ichere ka gị iPhone Malitegharịa ekwentị. Ị pụrụ ịhụ na iPhone amalite na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS idozi iPhone rapaara na Apple logo nke!
> Resource> iPhone> [Esemokwu ofu] iPhone Nọgidesiri na Apple Logo ihuenyo